देउवा र पौडेललाई भेटेपछि सिटौला भन्छन्- फागुनमा महाधिवेशन सम्भव छैन, वैशाखमा गरौं :: Setopati
देउवा र पौडेललाई भेटेपछि सिटौला भन्छन्- फागुनमा महाधिवेशन सम्भव छैन, वैशाखमा गरौं ‘सभापति र वरिष्ठ नेता जसरी पनि फागुनमै महाधिवेशन हुन्छ भन्नुहुन्छ, म अचम्ममा छु’
प्रशन्न पोखरेल काठमाडौं, असोज ११
नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला डेढ महिना झापा बसेर गत शुक्रबार काठमाडौं आएका छन्।
यसबीचमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबारे उनले शनिबार आफू निकटका केन्द्रीय सदस्यहरू प्रदीप पौडेल, गगन थापा, उमाकान्त चौधरीलगायतसँग कुराकानी गरेका थिए।
फागुन ७ देखि १० गतेसम्म गर्ने भनिएको कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनका लागि कार्यतालिकाअनुसार काम नभएको बुझेपछि सिटौलाले सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग भेटेर कुराकानी गरेका छन्।
शनिबार सभापति देउवा र आइतबार वरिष्ठ नेता पौडेलसँग भेटेका सिटौलासँग सेतोपाटीले कुराकानी गरेको छ।
सभापतिसँग तपाईंको के कुरा भयो?
म डेढ महिना काठमाडौं थिइनँ। आफ्नो जिल्ला झापामा बसेँ। अस्ति काठमाडौं आएपछि साथीहरूसँग भेटेँ, वस्तुस्थिति बुझेँ। प्रदीप, गगन, उमाकान्तलगायत साथीहरूसँग भेटेपछि कार्यतालिकाअनुसार पार्टी अगाडि बढेको छैन भन्ने थप प्रष्ट भयो।
खासगरी मेरो चासो पार्टीको १४ औं महाधिवेशनबारे हो। मुख्य सरोकार नै महाधिवेशन कहिले र कसरी गर्ने भन्नेमा छ। मैले सभापतिसँग भेटेर महाधिवेशनबारे कुरा गरेँ।
उहाँलाई मैले केन्द्रीय समितिमा त्यसबेलै कार्यतालिका व्यावहारिक भएन भन्ने कुरा राखेको सम्झाएँ। साउन-भदौमा क्रियाशील सदस्यता टुंग्याउने कार्यतालिका बनाइएको थियो, त्यो नै अव्यावहारिक थियो।
बाढीपहिरो र कोरोना त्रासबीच कसरी क्रियाशील सदस्यता टुंग्याउन सकिथ्यो र त्यो व्यावहारिक हुन्थ्यो र? यस्तो बेला क्रियाशील टुंग्याऔं भनेर पार्टीका तल्ला तहमा भन्न पनि सकिने अवस्था थिएन।
कार्यतालिकामा भनेजस्तो साउनमा क्रियाशील बाँडिसक्ने समय दिनु नै गलत थियो। तल्ला तहलाई पर्याप्त समय दिए पो क्रियाशील वितरण र नवीकरण गर्न सकिन्छ।
त्यसबेला मैले कार्यतालिका मिलेन भन्दा साथीहरूले हुन्छ किन हुँदैन भन्नुभएको थियो। तर असोज लागिसक्दा पनि अहिलेसम्म ७७ जिल्लामध्ये एउटा जिल्लाले पनि क्रियाशील टुंग्याएको जानकारी केन्द्रमा पठाएको छैन।
कतिपय जिल्लामा समायोजन नै बाँकी छ। क्रियाशील फारम नै पुगेको छैन।
सभापति देउवाले के जवाफ दिनुभयो त?
उहाँले जसरी पनि फागुनमै महाधिवेशन गर्ने हो, हुन्छ महाधिवेशन भन्नुभयो।
समायोजनकै काम सकिएका छैनन्। क्रियाशील फारम कतिपय जिल्लामा पुगेको छैन। क्रियाशील टुंग्याउन छानबिन समिति पार्टीले बनाएकै छैन।
यस्तो अवस्थामा कसरी फागुनमै महाधिवेशन हुन्छ भनेर सभापतिजीलाई सोधेँ। उहाँले जसरी पनि हुन्छ भन्नुभयो। म अचम्मित छु। असोज आधा हुन लाग्यो, कात्तिकमा दसैं, मंसिरमा तिहार र छठ छ। यस्तो बेला क्रियाशील सदस्यता टुंग्याऔं भनेर तलका साथीहरूले कसरी काम गर्न सक्नुहुन्छ र?
वरिष्ठ नेता पौडेलसँग पनि भेटघाट गर्नुभएको थियो, के कुरा भयो?
सभापतिजीसँग हिजो जे कुरामा छलफल गरेको हो त्यही प्रसंगमा छलफल गर्न म आज उहाँको निवासमा पुगेको हुँ।
महाधिवेशन कार्यतालिका प्रभावित भएको उहाँको भनाइ रह्यो। तर पौडेलले पनि फागुनमै महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्नुभयो।
सभापतिजी र वरिष्ठ नेताजी फागुनमा नहुने महाधिवेशनमा एकमत हुनुहुन्छ किन हो थाहा भएन।
महाधिवेशन कसरी गर्ने भन्नुहुन्छ?
महाधिवेशन प्रक्रियाबारे उहाँले खासै केही भन्नुभएन। जसरी पनि फागुनमै महाधिवेशन गर्नेमा वरिष्ठ नेताको पनि जोड थियो।
हामीले महाधिवेशनमा आफैंबीच प्रतिस्पर्धामात्र होइन निष्पक्ष महाधिवेशन पनि गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि समझदारीमा कार्यतालिका बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा मैले वरिष्ठ नेतासँग राखेँ।
पौडेलले आन्तरिक विवादबारे पनि केही भन्नुभयो कि?
सभापतिजीले पार्टीभित्र ज्यादति गर्नुभयो पार्टीमा निवेदन दिन्छु भन्नुभएको छ। निवेदन दिनुभयो भने असोज १९ मा बस्ने केन्द्रीय कार्यसमितिमै यसबारे छलफल गरौंला भनेँ।
पार्टीको आन्तरिक विवादबारे तपाईंले पौडेलसँग के भन्नुभयो?
समझदारीबाट महाधिवेशन कार्यतालिका बनाउने, कुनै कारणले कार्यतालिका प्रभावित भए समझदारीबाटै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले वरिष्ठ नेतासँग राखेको हुँ। बाहिर मुठभेड गरेर त महाधिवेशन हुने वातावरण बन्दैन नि भन्ने मेरो कुरा हो।
तोकिएको समयमा महाधिवेशन भएन भने जिम्मेवारी पदाधिकारीसहित वरिष्ठ नेताले लिनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ।
सभापतिपछि त दोस्रो नम्बरमा वरिष्ठ नेता हो नि! त्यसपछि उपसभापतिहरू, महामन्त्रीहरू र सिंगै पदाधिकारी पनि हुन्छन्।
सामुहिक जिम्मेवारी लिनुपर्‍यो भन्ने हो। एकले अर्कोलाई आरोप लगाएर महाधिवेशन सम्पन्न हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। पार्टीभित्रका बेतिथिबारे केन्द्रीय समितिमा छलफल गर्ने हो।
महाधिवेशन गर्न क्रियाशील टुंग्याउनुपर्ला नि!
महाधिवेशन भनेको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट संगठन निर्माण गर्ने हो।
महाधिवेशनले वडादेखि केन्द्रसम्म आठ तहमा संगठन निर्माण पनि गर्छ कांग्रेसमा। यसका लागि समझदारीबाटै कार्यतालिका बनाउनुपर्छ अनि महाधिवेशनको वातावरण बन्छ।
यसअघिका महाधिवेशनमा समझदारीबाट नै कार्यतालिका बनाएको हो।
निष्पक्ष महाधिवेशन गरेकैले सबैले स्वीकार पनि गरिएको हो। सभापतिजीलाई मैले यसपटक महाधिवेशन निष्पक्षतामा प्रश्न उठेको छ गम्भीर हुनुस् भनेको छु।
हाम्रो पार्टीमा जहिले पनि हुने समस्या क्रियाशीलको हो। क्रियाशीलको अन्तिम सूची तयार भएपछि त अधिवेशन तीन महिनामै सकिन्छ। अधिवेशन गराउन निर्वाचन समिति बनेकै छ। पहिले क्रियाशील टुंग्याउनुपर्छ त्यसका लागि छानबिन समिति पनि गठन गर्नुपर्‍यो।
केन्द्रीय समिति १९ गते बस्दैछ, बैठकमा के भन्नुहुन्छ?
असोज १९ मा केन्द्रीय समिति बस्छ। मेरो प्रष्ट भनाइ महाधिवेशन सम्पन्न गर्नेमा केन्द्रीत रहन्छ। महाधिवेशन निष्पक्ष कसरी बनाउने र सबैले मान्य हुने कसरी बनाउने भन्ने हो। समझदारीमा कार्यतालिका बनाउँदै महाधिवेशन गर्ने र पार्टीमा वृहत एकता हुने वातावरण बनाउने प्रष्ट दृष्टिकोण मेरो छ।
उसो भए अब कहिले महाधिवेशन गर्ने त?
ढिलोमा पनि वैशाखभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्छ। महाधिवेशन प्रतिनिधि भेला गरेरै महाधिवेशन गर्न सम्भव छ तर स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाउनु पर्छ।
कोरोनाकै बीचमा महाधिवेशन गर्न सकिएला?
सकिन्छ। कोरिया, श्रीलंकाले चुनाव गरे त! अमेरिकामा चुनाव हुँदैछ। कोरोनाबाट डराउनु पर्ने अवस्था छैन तर स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्नुपर्छ। अब कोरोना त्रासले कोठाभित्र लुकेरमात्रै हुँदैन।
वैशाखमा महाधिवेशन गर्नेबारे सभापति र वरिष्ठ नेतासँग पनि कुरा भयो कि?
कुरा गरेको हुँ। तर उहाँहरू जसरी पनि फागुनमै हुन्छ भन्नुहुन्छ। कसरी हुन्छ भनेको प्रक्रियाबारे खुलाउनु हुन्न।
क्रियाशील टुंगेको छैन, चाडपर्व छन् कसरी सम्भव छ र फागुनमा महाधिवेशन? कोरोना छ भनेर केन्द्रका नेता घरमै बस्ने तलका नेतालाई क्रियाशी बाँड भनेर त भन्न मिल्दैन नि!
क्रियाशील वितरणका लागि दुई/तीन महिना समय तल्ला निकायलाई दिनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो।
प्रकाशित मिति: आईतबार, असोज ११, २०७७, ०८:०४:००